ရှတေိဂုံစတေီပုံရိပျကို နငျးပွီးဖြျောဖွခေဲ့တယျဆိုပွီး ဆန်ဒပွခံရတဲ့ Project K ဘကျက ရပျတညျလိုကျတဲ့ မောငျမောငျအေး | Popular
October 14, 2020 Asian Fame
Asia Song Festival 2020 မှာ ပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့ပြီး အောက်တိုဘာ ၁၃ရက်နေ့က ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ Project K အဖွဲ့ကို လေဆိပ်နားမှာ ဆန္ဒလာပြခဲ့ကြပါတယ်။ Project K အဖွဲ့ ဟာ ဖျော်ဖြေစဉ်မှာ ရွှေတိဂုံစေတီပုံရိပ်ကို နင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် မကျေနပ်ကြတဲ့အတွက် အခုလိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မောင်မောင်အေးက Project K ဘက်က ရပ်တည်ပြီး အခုလိုရေးသားခဲ့ပါတယ်
ဘုရားသူခိုး ထောင်ထွက် ကြေးစားလူသတ်ကောင် ကိုကျတော့ လွတ်မြောက်ပါစေကြောင်း ဘုရားမှာ ဆုတောင်းပေးရတာနဲ့….ကယ်တင်ရှင်သူရဲကောင်းအဖြစ် ငါတို့သည်ကြည်လင်းများသာ ဆိုတဲ့ပရိုဖိုင်းတွေချိန်းကြရတာနဲ့….သူ့ပုံပါတဲ့အင်္ကျီတောင်ရိုက်ပြီး ဝတ်လိုက်ကြသေးတာနော်…
ဘုရားပေါင်းများစွာကိုလက်ချိုးပူဇော်ထားခဲ့ကြတော့လည်း သားတို့ သမီးတို့အဲ့နေ့က ကျောင်းမတက်တဲ့ရုပ်တွေနဲ့….
ရွှေဝါရောင်အရေးအခင်းမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေထဲအထိဝင်ပြီး နံပါတ်တုတ်ဆွမ်းကပ်ခဲ့ကြတာတို့… လယ်တီသိမ် ဘူဒိုဇာနဲ့ အဖြိုခံရတာတို့… လက်ပန်းတောင်းတောင် မှာ မီးလောင်ဗုံးကြောင့် ဆရာတော်တွေ တကိုယ်လုံး မီးသင့်ခဲ့ရတာတွေက အမေရိကားမှာပဲ ဖြစ်ခဲ့လို့ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုလို….
အခု Project K အဖွဲ့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လုံးဝမရှိခဲ့သော …ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ဒါမျိုးနင်းပြကြမယ်ဟေ့ ဆိုပြီး ကြံစည်ရဲကြမှာမဟုတ်ဆိုတာ အသက်ကြေးတောင်လောင်းရဲသလို ပိုက်ဆံတွေတောင်းသလောက်ပုံပေးမယ် .. အခုလို ဘုရားပုံထိုးပြီးနင်းပြကြလို့ ခိုင်းရင်တောင် ကျိန်းသေ ငြင်းကြမဲ့ကလေးတွေ …. သူတို့တယောက်ချင်းစီရဲ့ လိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့ နေထိုင်ပြောဆိုဆက်ဆံမှုတွေ…. သူတို့တယောက်ချင်းစီရဲ့ FB account တွေမှာ ဘာသာရေးစော်ကားဖို့မပြောနဲ့…hate speech တွေတောင် မရှိခဲ့တာတွေက သူတို့ရဲ့ရပ်တည်မှုတွေကို ဖော်ပြနေခဲ့တာ…
တဖွဲ့လုံးလည်း သေသေချာချာ တိုင်းသိပြည်သိတောင်းပန်ပြီးသွားပြီ…
သူတို့ကိုယ်တိုင် စင်ပေါ်မှာ ဘယ်လိုမှ မသိနိုင်လိုက်တဲ့ အမှားတခု… ( သင်ခန်းစာယူစရာဆိုလို့ နောက်ဆို full rehearsal လုပ်ပြီးတာနဲ့ မန်နေဂျာကနေပြီး ဖျော်ဖြေမှု အစအဆုံးကို Video ပြန်ကြည့်ရင်း အသေးစိတ်ထောင့်ပေါင်းစုံကနေ final ပြန်စစ်ဆေးရမယ် .. ပြီးရင် တကယ့်ပွဲမှာ အဲ့အတိုင်းပဲ နောက်ခံပြသမှု – မီး – အသံ အကုန် ဖြစ်ရမယ် ဆိုတဲ့ သတိကပ်နေပေးနိုင်တဲ့သူကို ခေါ်သွားရမဲ့ သင်ခန်းစာ ) ဒါကို သေချာရှင်းပြ တောင်းပန်နေခဲ့တာတောင် အခဲမကျေနိုင်ဘဲ မန့်တွေမှာ မအေ နှမတွေမွှန်ထူနေအောင်ဆဲပြီး သတ်ပစ်ဖို့တွေပါ ကြိမ်းမောင်းကြတဲ့ ကီးဘုတ်ဖိုက်တာတွေ… သူ့အသက်ကိုရန်ရှာတာတောင်ခွင့်လွှတ်ပေးတော်မူတဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်ကို လက်ကိုင်ထားကြသူတွေဆိုပြီး လေဆိပ်မှာ အဖွဲ့ရဲ့ စာလုံးပေါင်းတောင်မှန်အောင်မပေါင်းနိုင်ရှာဘဲ ဆန့်ကျင်ကြ .. ကန့်ကွက်ကြ.. တိုင်းပြည်ကတောင်နှင်ထုတ်ချင်ကြသတဲ့…
သည်းခံခြင်း နားလည်ခွင့်လွှတ်ခြင်း နဲ့ နူးညံ့ကြင်နာသနားတတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေဟာ သင်ယူ ကျင့်ကြံ ပွားများစရာ မဟုတ်ဘူးလား… ဆိုတာ အဲ့လို အပူဒေါသတွေအုံကြွတဲ့အခါတွေမှာ ပါပါလာတတ်တဲ့ ဘုရားသားတော်တွေကိုလည်း သေချာမေးကြည့်ချင်တော့တယ်…
အမှောင်တကာ့အမှောင်ဆုံးထဲမှာ ဉာဏ်ပညာ နဲ့ ချစ်ခြင်းတရား အမှောင်ဖုံးခံရမှာ အကြောက်ဆုံးမို့လို့ အမှောင်ထဲကသူတွေလာဆဲကြမှာသိသိကြီးနဲ့ ဒီပို့စ်ကိုရေးပါတယ်…
ဟိုလူဖျက်မှာ ​စိုးလို့ ဒီလူ လာဖျက်မှာကြောက်လို့ ဆိုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ဘယ်သူမှ လာဖျက်လို့မရနိုင်တဲ့ ကိုယ့်နှလုံးသားထဲမှာ ဘုရားတည်နိုင်ကြသူတွေ ဖြစ်ကြပါစေသား……
Asia Song Festival 2020 မှာ ပါဝငျဖြျောဖွခေဲ့ပွီး အောကျတိုဘာ ၁၃ရကျနကေ့ ပွနျလညျရောကျရှိခဲ့တဲ့ Project K အဖှဲ့ကို လဆေိပျနားမှာ ဆန်ဒလာပွခဲ့ကွပါတယျ။ Project K အဖှဲ့ ဟာ ဖြျောဖွစေဥျမှာ ရှတေိဂုံစတေီပုံရိပျကို နငျးခဲ့တဲ့အတှကျကွောငျ့ မကနြေပျကွတဲ့အတှကျ အခုလိုဆန်ဒပွခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုဆန်ဒပွမှုတှနေဲ့ပတျသကျပွီး မောငျမောငျအေးက Project K ဘကျက ရပျတညျပွီး အခုလိုရေးသားခဲ့ပါတယျ။
ဘုရားသူခိုး ထောငျထှကျ ကွေးစားလူသတျကောငျ ကိုကတြော့ လှတျမွောကျပါစကွေောငျး ဘုရားမှာ ဆုတောငျးပေးရတာနဲ့….ကယျတငျရှငျသူရဲကောငျးအဖွဈ ငါတို့သညျကွညျလငျးမြားသာ ဆိုတဲ့ပရိုဖိုငျးတှခြေိနျးကွရတာနဲ့….သူ့ပုံပါတဲ့အင်ျကြီတောငျရိုကျပွီး ဝတျလိုကျကွသေးတာနျော…
ဘုရားပေါငျးမြားစှာကိုလကျခြိုးပူဇျောထားခဲ့ကွတော့လညျး သားတို့ သမီးတို့အဲ့နကေ့ ကြောငျးမတကျတဲ့ရုပျတှနေဲ့….
ရှဝေါရောငျအရေးအခငျးမှာ ဘုနျးကွီးကြောငျးတှထေဲအထိဝငျပွီး နံပါတျတုတျဆှမျးကပျခဲ့ကွတာတို့… လယျတီသိမျ ဘူဒိုဇာနဲ့ အဖွိုခံရတာတို့… လကျပနျးတောငျးတောငျ မှာ မီးလောငျဗုံးကွောငျ့ ဆရာတျောတှေ တကိုယျလုံး မီးသငျ့ခဲ့ရတာတှကေ အမရေိကားမှာပဲ ဖွဈခဲ့လို့ ကိုယျနဲ့မဆိုငျသလိုလို….
အခု Project K အဖှဲ့ရဲ့ ရညျရှယျခကျြလုံးဝမရှိခဲ့သော …ဘယျလိုနညျးနဲ့မှ ဒါမြိုးနငျးပွကွမယျဟေ့ ဆိုပွီး ကွံစညျရဲကွမှာမဟုတျဆိုတာ အသကျကွေးတောငျလောငျးရဲသလို ပိုကျဆံတှတေောငျးသလောကျပုံပေးမယျ .. အခုလို ဘုရားပုံထိုးပွီးနငျးပွကွလို့ ခိုငျးရငျတောငျ ကြိနျးသေ ငွငျးကွမဲ့ကလေးတှေ …. သူတို့တယောကျခငျြးစီရဲ့ လိမ်မာယဉျကြေးတဲ့ နထေိုငျပွောဆိုဆကျဆံမှုတှေ…. သူတို့တယောကျခငျြးစီရဲ့ FB account တှမှော ဘာသာရေးစျောကားဖို့မပွောနဲ့…hate speech တှတေောငျ မရှိခဲ့တာတှကေ သူတို့ရဲ့ရပျတညျမှုတှကေို ဖျောပွနခေဲ့တာ…
တဖှဲ့လုံးလညျး သသေခြောခြာ တိုငျးသိပွညျသိတောငျးပနျပွီးသှားပွီ…
သူတို့ကိုယျတိုငျ စငျပျေါမှာ ဘယျလိုမှ မသိနိုငျလိုကျတဲ့ အမှားတခု… ( သငျခနျးစာယူစရာဆိုလို့ နောကျဆို full rehearsal လုပျပွီးတာနဲ့ မနျနဂြောကနပွေီး ဖြျောဖွမှေု အစအဆုံးကို Video ပွနျကွညျ့ရငျး အသေးစိတျထောငျ့ပေါငျးစုံကနေ final ပွနျစဈဆေးရမယျ .. ပွီးရငျ တကယျ့ပှဲမှာ အဲ့အတိုငျးပဲ နောကျခံပွသမှု – မီး – အသံ အကုနျ ဖွဈရမယျ ဆိုတဲ့ သတိကပျနပေေးနိုငျတဲ့သူကို ချေါသှားရမဲ့ သငျခနျးစာ ) ဒါကို သခြောရှငျးပွ တောငျးပနျနခေဲ့တာတောငျ အခဲမကနြေိုငျဘဲ မနျ့တှမှော မအေ နှမတှမှေနျထူနအေောငျဆဲပွီး သတျပဈဖို့တှပေါ ကွိမျးမောငျးကွတဲ့ ကီးဘုတျဖိုကျတာတှေ… သူ့အသကျကိုရနျရှာတာတောငျခှငျ့လှတျပေးတျောမူတဲ့ ဗုဒ်ဓရဲ့ တရားတျောကို လကျကိုငျထားကွသူတှဆေိုပွီး လဆေိပျမှာ အဖှဲ့ရဲ့ စာလုံးပေါငျးတောငျမှနျအောငျမပေါငျးနိုငျရှာဘဲ ဆနျ့ကငျြကွ .. ကနျ့ကှကျကွ.. တိုငျးပွညျကတောငျနှငျထုတျခငျြကွသတဲ့…
သညျးခံခွငျး နားလညျခှငျ့လှတျခွငျး နဲ့ နူးညံ့ကွငျနာသနားတတျခွငျးဆိုတဲ့အရာတှဟော သငျယူ ကငျြ့ကွံ ပှားမြားစရာ မဟုတျဘူးလား… ဆိုတာ အဲ့လို အပူဒေါသတှအေုံကွှတဲ့အခါတှမှော ပါပါလာတတျတဲ့ ဘုရားသားတျောတှကေိုလညျး သခြောမေးကွညျ့ခငျြတော့တယျ…
အမှောငျတကာ့အမှောငျဆုံးထဲမှာ ဉာဏျပညာ နဲ့ ခဈြခွငျးတရား အမှောငျဖုံးခံရမှာ အကွောကျဆုံးမို့လို့ အမှောငျထဲကသူတှလောဆဲကွမှာသိသိကွီးနဲ့ ဒီပို့ဈကိုရေးပါတယျ…
ဟိုလူဖကျြမှာ ​စိုးလို့ ဒီလူ လာဖကျြမှာကွောကျလို့ ဆိုတဲ့သူတှအေနနေဲ့ ဘယျသူမှ လာဖကျြလို့မရနိုငျတဲ့ ကိုယျ့နှလုံးသားထဲမှာ ဘုရားတညျနိုငျကွသူတှေ ဖွဈကွပါစသေား……